कोरोनाको कारण नेपालको पर्यटनमा साढे एक खर्ब क्षति हुन सक्ने, १३ लाख कर्मचारी प्रभावित – BikashNews
कोरोनाको कारण नेपालको पर्यटनमा साढे एक खर्ब क्षति हुन सक्ने, १३ लाख कर्मचारी प्रभावित
२०७७ वैशाख ८ गते १६:३५ विकासन्युज
काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा निकै असर परिरहेको छ । यो असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । विशेष गरेर कोभिड १९ ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चौपट बनाएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु भएकै समयमा यो भाइरस देखिनुले पनि नेपाली पर्यटन बजारमा यसको ठूलो धक्का लागेको बताइएको छ ।
नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको कारण नेपालको पर्यटनमा करिब १ खर्ब ६० अर्ब क्षति हुने बताएका छन् । कोरोनाको असरबाट पर्यटन क्षेत्रमा करिब १ खर्ब ६० अर्ब क्षति हुने अनुमान गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका पुर्व कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दिपकराज जोशीले बताए ।
पर्यटन क्षेत्रमा १३ लाख जनशक्तीलाई समेत असर गरेको जोशीले बताए । सरकारले सन् २०२२ सम्मको गुरु योजना बनाएर पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थान गर्न आवश्यक रहेको जोशीको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले नीतिगत परिवर्तन गरेर नयाँ संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ, यो एउटा नयाँपन ल्याउने ठूलो अवसर पनि हो,’ उनले भने ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले ‘कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र आगामी बाटो’ विषयको भिडियो अन्र्त्क्रियामा उनले सो कूरा बताएका हन् ।
यकिन तथ्याकं संकलन गरेर विशेष योजना बनाइनेः मन्त्री भट्टराई
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटनको पुनर्उत्थानका लागि विशेष तथ्याकं संकलन गर्ेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
मन्त्री भट्टराइले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कति लगानी भन्ने विषयमा समेत अहिलेसम्म खास तथ्यांक नरहेकोले अहिले तथ्यांक संकलनसंगै क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको समेत बताए । ‘तथ्यांकको संकलन पर्यटन क्षेत्रमा लगानी कति छ? बैंकहरुको लगानी कति छ ? श्रमिक कति छन् र क्षति के कति हो भन्ने आउछ,’ मन्त्री भट्टराईले भने । तथ्यांक आएपछि सरकारले लगानीकर्ता र श्रमिकमा विषयमा खास कदम चाल्ने समेत छलफलमा जानकारी दिएका छन् ।